जसले कागजलाई केरेर नोट बनाउँछन, कला बेचेर पढ्ने रहर – Enayanepal.com
जसले कागजलाई केरेर नोट बनाउँछन, कला बेचेर पढ्ने रहर
सुर्खेत, साउन २३ ।
एसएलसीमा ‘बी’ ग्रेड ल्याए पनि पढ्न पाएनन्
रकु–३ सेरीज्यूला कालिकोटका दीर्घ बि.क १५ वर्षका भए । अहिले मात्रै प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उनी सुर्खेत आइपुगेका छन् । अहिलेको लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा उनले ‘बी’ ग्रेड ल्याए तर उनले यो भन्दा माथी पढ्ने रहर तत्काल पुरा हुन सकेन ।
गाउँकै शंकर उच्च माध्यामिक विद्यालयबाट ‘बी’ ग्रेसमा एसएलसी पास गरेका उनी सिभिल ओभरसियर पढ्न भनी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर आए । तर ओभरसियर पढ्नलाई उनीसंग पैसा थिएन ।
वीरेन्द्रनगरमा रहेको राष्ट्रिय प्राबिधिक शिक्षालयमा उनले पुरा छात्रबृत्तिका लागि निवेदन दिएर प्रवेश परीक्षामा सहभागी भए । नाम निस्किएन । अब उनको एसएलसी भन्दा माथिल्लो तह पढ्ने रहरमा तत्कालका लागि पूर्ण बिराम लागिसकेको छ ।
कालिकोटबाट ओभरसियर पढ्ने आशा बोकेर आएका बि.क अहिले वीरेन्द्रनगरमा रहेको बसन्त आर्टमा काम गर्न थालेका छन् ।
घरको आर्थिक अवस्था पनि कम्जोर भएको र पढ्नका लागि छात्रबृत्तिमा नाम ननिस्किएकोले उनले घर नफर्कि वीरेन्द्रनगरमै काम गरेर बस्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘‘घरबाट ओभरसियर पढ्न भनेर सुर्खेत आएको हुँ,’ उनले भने–‘घरका पैसा खर्च गरेर पढ्न सक्ने अवस्था छैन, छात्रबृत्तिमा नाम निस्किएन, घरमा गएर के गर्ने, यही बसन्त आर्टमा काम गर्न लागेको छु ।’’
तस्बीर ः दीर्घ र उनले बनाएको एक हजार नोटको चित्र र सक्कली नोट ।
बि.क. को घरमा आमा र अन्य चार भाईबहिनीहरु छन् । आमालाई भाईबहिनीहरु पाल्न पनि धौधौ भएकोले आफू घर नभएर यतै केही गरेर पढ्न भनी बसेको उनले बताए । अहिले पढ्न नपाए पनि काम गरेर पछि पढ्न आशा उनले व्यत्तः गरे । अहिले साथीकोमा बसेर बसन्त आर्टमा काम गर्न थालेको भन्दै उनले पछि पैसा दिएपछि पढ्ने बताए ।
बि.क.मा अपत्यारिलो कला छ । उनले राम्रो आर्ट गर्न सक्छन । उनले फोटोकपी पेपरमा आफ्नै हातले लेखेर नेपाली नोटको फोटोकपी उतार्न सक्छन । आफूले सुरुमा एक हजारको नोट हेरेर आर्ट गर्ने प्रयास गरेको बताए । एक हजारको नोट अहिले नहेरेरै उनले जस्ताको तस्तै उतार्न सक्छन ।
आफूले पहिलेदेखि नै चित्र कोर्ने गरेको भन्दै उनले छोटो समयमा प्रयास गरेर नोटहरुलाई पनि चित्रमा उतार्न सफल भएको बताए । अब आफ्नो यही कलाले ठाउँ पाएमा पढ्ने रहर पुरा गर्ने उनले बताए । ‘‘राम्रो काम भयो भने यसैबाट पढ्नुपर्ला,’ उनले भने–‘घरबाट पढाउन सक्ने अवस्था छैन, ।’’ उनले बुवाको वि.स. २०६६ सालमा हत्या भएको र त्यसपछि परिवार चलाउन आमालाई गाह्रो भएको बताए ।